Baye Ag Bakabo, onye a na-enyo enyo n ° 1, bụ Barkhane - Jeune Afrique - gburu teles relay
Baye Ag Bakabo, onye a na-enyo enyo na n ° 1, gburu Barkhane - Jeune Afrique
n'ime ezinụlọ Al Karama, a na m ajụ… - Jeune Afrique
Ihe kpatara Félix Tshisekedi ji egbu oge - Jeune Afrique
Al Karama, njikọ nke enweghị nsọpụrụ - Jeune Afrique
Undated foto nke Baye Ag Bakabo. DR / JA
Ndị agha France ahụ gburu Baye Ag Bakabo, onye a na-enyo enyo na ogbugbu ndị ọrụ RFI abụọ pụrụ iche Ghislaine Dupont na Claude Verlon. Agbagburu ya mgbe ọ na-arụ ọrụ na mgbago ugwu Mali.
“Aha ha bụ Ghislaine Dupont na Claude Verlon, ha bụ ndị France, ha bụ ndị nta akụkọ. Na November 2, 2013, ha tọọrọ na Mali ma gbuo ndị na-eyi ọha egwu Al Qaeda na Islamic Maghreb. Onye isi agha jihadist nke hazigharịrị ịtọrọ mmadụ na ogbugbu ndị mmadụ ka egbuola site n’aka Barkhane. "
Na ozi agbasaara na netwọkụ mmekọrịta, ụda ahụ dị oke njọ, Mịnịsta France nke ndị agha, Florence Parly, kwuputara "nnọpụiche" nke Baye Ag Bakabo, "onye isi AQIM ma na-ahụ maka ịtọrọ mmadụ" na igbu ọchụ n’ime ndị ozi abụọ pụrụ iche nke RFI. "Nnọpụiche ya na-eweta njedebe ogologo oge", gosipụtara onye ozi France.
Egburu Baye Ag Bakabo n'oge ọrụ ndị agha France nke Barkhane duziri na June 5 na mpaghara Aguelhok na ugwu Mali. Dị ka onye ozi ahụ si kwuo, ndị agha France “hụrụ nkwadebe nke mwakpo ndị na-eyi ọha egwu” “maka“ njigide nke ụsụụ ndị agha Chadian nke Minusma ”. E "kpochapụrụ" ndị na-eyi ọha egwu anọ, gụnyere Ag Bakabo.
Edemede a pụtara na mbụ https://www.jeuneafrique.com/1187072/politique/assassinat-des-envoyes-speciaux-de-rfi-baye-ag-bakabo-le-suspect-n1-a-ete-tue -by -ike /
Mmanụ Castor maka nku anya: otu esi eji ya mee ka ha sie ike - SANTE PLUS MAG
Usoro intestinal: ị kwesiri iri probiotics ma ọ bụ prebiotics? - AHUIKE tinye MAG
Na Cameroon, oke iwe nke ndị agha ebugara n'ihu Boko Haram na ...